Midowga Afrika oo sheegay in Midowga Yurub ay dhaqaale ugu deeqeen Howlgalkooda gudaha Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMidowga Afrika oo sheegay in Midowga Yurub ay dhaqaale ugu deeqeen Howlgalkooda gudaha Soomaaliya
Midowga Afrika oo sheegay in Midowga Yurub ay dhaqaale ugu deeqeen Howlgalkooda gudaha Soomaaliya
September 23, 2016 Abdi Omar Bile Somalia, South-Central 0
Ciidamada ka socda Midowga Afrika oo ku sugan gudaha Soomaaliya.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Midowga Afrika ayaa sheegay in $199.6 milyan oo ah taageero maaliyadeed ay ka heleen Midowga Yurub, dhaqaalahaas ayaa loogu deeqay Howlgalka Midowga Afrika ee gudaha Soomaaliya, iyadoo dalka Soomaaliya uu isku diyaarinayo doorasho bisha soo socota.
Heshiiska ayaa la saxiixay Arbacadii lasoo dhaafay waxaana lacagtaas lagu bixinayaa mudadii u dhaxaysay 1-da Janaayo ilaa iyo 30-ka September, 2016, oo ah dhaqaale loo isticmaalay mushahaarka ciidamada howlgalka iyo booliis, mushahaarka shaqaalaha caalamiga ah iyo kuwa maxaliga ah iyo kharashaadka howlgalada, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay Midowga Afrika.
Midowga Yurub ayaa ah dhaqaale bixiyaha ugu weyn ee Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), horey waxay u baxsheen dhaqaale ku dhow 1.2 bilyan oo lacagta Yuraha ah tan iyo sanadkii 2007, bar kamid ah lacagtaas ayaa ku baxday mushahaar. Tabarucaadii Midowga Yurub ee AMISOM ayaa tan iyo bishii Janaayo ee sanadkan 30% laga jaray sababtoo ah xadayn misaaniyadeed.
“Taageerada dhaqaalahan cusub ayaa imaanaya iyadoo lagu jiro xilli khatar ah, mar ay AMISOM ku mashquulsantahay howlgalo waa-weyn oo lidi ku ah maleeshiyada Al-Shabaab iyo isu diyaarinta doorashooyinka dalka Soomaaliya,” sidaa waxaa bayaan ku yiri Midowga Afrika.
Soomaalida ayaa isku diyaarinaysa in ay doorato madaxweynaha dalka 30-ka bisha Oktoobar ee soo socota.
July 11, 2016 Maleeshiyada al-Shabaab oo weerartay saldhig ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin koonfurta galbeed ee Muqdisho
Bosaso student wins Puntland Quran recitation contest
Garowe-(Puntland Mirror) Bosaso’s Ibrahim Mohamed Mohamoud wins Puntland Quran recitation contest in which competitors from Puntland regions took part. Puntland’s President Abdiweli Mohamed Ali has attended the concluding ceremony held in al-Huda mosque in [...]
Baarlamaanka Puntland oo doortay guddoomiye cusub
Garoowe-(Puntland Mirror) Baarlamaanka Puntland ayaa maanta oo Jimce ah Cabdixakiim Maxamed Axmed oo loo yaqaan Dhoobo-daareed u doortay guddoomiye. Dhoobo-daareed ayaa helay 43 cod halka ninkii la loolamayay uu helay 23 cod intii lagu guda [...]